PressReader - Isolezwe: 2018-04-13 - Kuvulwe umbukiso ohlomulisa abafundi
Kuvulwe umbukiso ohlomulisa abafundi
KUKHUTHAZWE imiphakathi ukuthi ijwayele ukubuka imibukiso ezikhungweni zamagugu ngesikhathi kuvulwa umbukiso wabafundi eDurban Art Gallery izolo.
Umbukiso, obizwa ngeInterpreting History Through the Eyes of the Child, uhlanganise izithombe nemidwebo okwenziwe abafundi abayingxenye yomncintiswano iPassport Book. Umncintiswano owaqala ngo-2013 wenziwa uMasipala weTheku, uMnyango wezeMfundo nezinye izinhlaka kwezomlando namagugu.
UNkk Tebogo Mzizi oyiSenior Manager kwaLibraries and Heritage ophikweni lwezamaPaki, Amasiko nokuNgcebeleka kuMasipala, uthe umncintiswano usiza ngokuthi izingane zithole umlando ojulile.
“Izincwadi ezifundwa ezikoleni azisixoxeli ngomlando wethu yingakho umncintiswano ubalulekile ezinganeni. Sekuyisikhathi sokuthi sizixoxele owethu umlando njengoba nezingane zenza njalo kulo mncintiswano. Ngezikhathi zethu uthisha ubesitshela konke singakwazi ukuzibonela okukhulunywa ngakho kodwa izingane seziyakwazi ukuzibonela umlando,” kuchaza uNkk Mzizi.
Uthe zingu-12 584 izingane esezivakashele izikhungo zamagugu kusukela umncintiswano waqalwa ngo-2013. Echaza ngomncintiswano uNkk Mzizi uthe abafundi bayiswa ezikhungweni eziyisithupha eziyingxenye yomncintiswano bese bexoxa ngomlando besebenzisa imidwebo nezithombe. Abafundi abawinile bathola nethuba lokuyovakashela eGermany njengoba umasipala usebenzisana nale lizwe kulolu hlelo.
“Siyajabula ngokuthi namhlanje sizobona umbukiso wezingane, okukhona nezimnyama. Bekunomqondo wokuthi iDurban Art Gallery ngeyabohlanga oluthile kodwa siyajabula ngoba izingane zizomema nemindeni yazo kulesi sikhungo. Imitapo yolwazi nezikhungo zomlando kwakhelwe imiphakathi ukuze ifunde,” kusho yena.
Uveze nokuthi abafundi abahlanu abake bangenela umncintiswano sebesemanyuvesi ahlukene futhi baphasa ngamalengiso.
Omunye wabafundi obengenele umncintiswano ngonyaka odlule nguSimelo Ngcamu (12) ofunda uGrade 7 eNonqanda Primary eCato Ridge. Uthe ufunde lukhulu ngoba kuningi akuthole ngomlando wakuleli okudingeke bawuxoxe ngezithombe. Bekukhona noSabelo Mhlongo (13) noMthobisi Mpanza (13) abafunda uGrade 6 eSiphosethu Primary eNtuzuma. Umfanekiso wabo, oyingxenye yombukiso, waphuma phambili nyakenye. Bathe bazomema imindeni yabo ukuze ivakashele lesi sikhungo ibone umsebenzi wabo. Umbukiso uzovulwa kuze kube wuMeyi 27 kanti umphakathi wamukelekile ukuthi uzobuka.
UZOBUKWA wumphakathi eDurban Art Gallery umfanekiso kaSabelo Mhlongo noMthobisi Mpanza baseSiphosethu Primary eNtuzuma, abawina emncintiswaneni iPassport Book owenziwa uMasipala weTheku minyaka yonke
Izithombe: THOKOZANI MBUNDA
ABAFUNDI baseH P Ngwenya Primary abakubafundi abebesemcimbini wokuvulwa kombukiso owenziwa abafundi eDurban Art Gallery bangoAzile Machi, Bruce Ngubane, Okuhle Mngadi noSambulo Mazibuko